PressReader - Isolezwe: 2018-04-17 - ‘Akumina engathi akuvulwe uphenyo’
‘Akumina engathi akuvulwe uphenyo’
Isolezwe - 2018-04-17 - IZINDABA - MHLENGI SHANGASE
OWAYENGUNGQONGQOSHE wezokuPhepha nezokuVikela uMnuz Sydney Mufamadi ukuchithile ukuthi nguyena owanxusa ukuthi kuvulwe kabusha uphenyo ngeqhaza lesishoshovu samalungelo abantu uNkk Winnie Madikizela-Mandela ngokubulawa kwesishoshovu se-UDF esasineminyaka engu-14, uStompie Seipei.
UMufamadi uthe owayengumholi weDemocratic Party, esiyaziwa nge-DA, uMnuz Tony Leon owafuna kujutshwe uphenyo wathi wayengeke anqabe ngoba awukho umthetho wamalungu e-ANC.
“Ukuvulwa kophenyo kwakuwumsebenzi kaKhomishana wamaPhoyisa hhayi ungqongqoshe. Akumina engathi akuvulwe uphenyo kodwa uTony Leon, ongakaze aphike ukuthi wathi akuphenywe kabusha. Njengoba ngangiwungqongqoshe ngangazi ukuthi kuzovulwa uphenyo ngoNkk MadikizelaMandela,” kusho uMufamadi.
Ukusho lokhu izolo ekhuluma esithangamini nabezindaba eGoli emva kokuvezwa kweqophamlando elikhuluma ngoNkk Madikizela-Mandela, iWinnie elimveza njengomuntu owathi akuvulwe kabusha uphenyo. Lenziwe nguNksz Pascale Lamche waseFrance.
Ubegeza igama lakhe njengoba owayeyinhloko yophiko oluphenya amacala okubulala nokuphanga uHenk Heslinga aveza kuleli qophamlando ukuthi uMufamadi owathi akuvulwe uphenyo.
“Njengomuntu owayengelona ivukana lephoyisa, uHeslinga wazi kahle ukuthi akuwona umsebenzi kangqongqoshe ukuthi kuphenywe. Ungqongqoshe wayengabhekene nomsebenzi wansuku zonke wamaphoyisa kodwa lowo umsebenzi kakhomishana wamaphoyisa,” kuqhuba uMufamadi. Uthe akuyena uNkk MadikizelaMandela kuphela umholi we-ANC owaya kwiKhomishini yamaQiniso nokuBuyisana.
“Ngaya kwiTRC ngemuva kokulahlwa yicala lokunyamalala kwephoyisa ngiyofuna ushwele. Bakhona nabanye abaholi abaya kwiTRC,” kuqhuba uMufamadi.
Uthe uMnuz George Fivaz wazisholo yena kwiTRC ukuthi ababutholanga ubufakazi obabuyamanisa uNkk Madikizela-Mandela nokufa kukaSeipei. Ukhale nangokuthi akazange anikwe ithuba lokuziphendulela kwiqophamlando.
UNksz Lamche uvumile ukuthi kwakumele amnike ithuba lokuziphendulela uMufamadi. Uthe waqeda ukushutha iqophamlando ngoJanuwari nyakenye wase elidlala okokuqala ngoJuni 2017, eNewtown, eGoli.
“Akekho owafuna ukulithenga. I-SABC yalichitha. Abanye babaholi be-ANC, umndeni kaNkk MadikizelaMandela, noNgqongqoshe babekhona beyolibuka okokuqala,” kusho uNksz Lamche.
Khonamanjalo intatheli yakwa-SABC, uNksz Thandeka Gqubule, ithe ixhumane nabameli ukuze igeze igama layo njengoba engomunye wabantu abavezwa kwenye i-video eyafakwa yiHuffington Post okwakukhuluma kuyo uNkk MadikizelaMandela evezwa njengomunye wabantu ababekhokhelwa ukuthi babhale kabi ngalesi sishoshovu okwaziwa ngeStratcom.
Kule video uNkk Madikizela-Mandela wabala izintatheli ezazimgxeka wathi zazisetshenziswa umbuso wobandlululo.
Ekhuluma nabezindaba izolo uthe wayebika ngazo zonke izinto ezazenzeka njengoba imithombo kwakungumphakathi owawukhala ngezinto ezazenziwa yiMandela Football Club esasebenzela iWeekly Mail esiyaziwa ngeMail&Guardian.